U-Igesund ube nesandla ekuqasheni: Prins | IOL Isolezwe
U-Igesund ube nesandla ekuqasheni: Prins
Isolezwe / 3 July 2012, 1:28pm /
UHLALELWE umsebenzi onzima uJose Marques wokuqhubeka lapho kushiye khona uGordon Igesund njengomqeqeshi weMoroka Swallows. Isithombe: GALLO IMAGES
USIHLALO weMoroka Swallows, uLeon Prins, udansele isigingci sikaGordon Igesund ngokuqoka uJose Zeca Marques njengomqeqeshi omusha waleli qembu eliqede isizini lilele endaweni yesibili ku-log ye-Absa Premiership.
Ukuqokwa kukaMarques obeyisekela lika-Igesund osayine inkontileka yeminyaka emibili neSafa (Bafana Bafana) kuqinisekiswe nguyena uPrins lapho eveze khona ukuthi weneme ngokuqasha lo mqeqeshi odabuka kwelasePortugal.
“Kuliqiniso ukuthi sesinaye umqeqeshi. Sibone kungcono ukuthi siqhubeke nalokhu ebese sivele sikuqalile ngesizini edlule. Ngiyamjabulela uMarques ukuthi ekugcineni ulitholile ithuba lokuziveza kwazise akalona ivukana kulo mkhakha,” kusho uPrins.
Ngesikhathi lesi sikhulu sibuzwa ngemibandela nobude benkontileka sithe asikazukwenaba kangako ngobude benkontileka.
“Asikazukukhuluma kakhulu ngeminyaka azoyihlala kwazise ufana nengane yasekhaya kodwa simbekele ukuthi njengoba siqede isizini sinamaphuzu angu-56 ngokudlule, kuyena sibheke amaphuzu angaphezulu kwalokho. Ngingakuqinisekisa nokuthi uGordon (Igesund) ube nesandla ekutheni siqashe uMarques nabadlali kukhona abakwenzile ukungisiza ngithathe lesi sinqumo,” kusho uPrins.Uphinde wakhala ngokuhlukana no-Igesund amthandazela ukuthi enze kahle kuBafana ukuze abathandi bebhola kuleli bezobona ukuthi ukhaliswa yini ngokuhlukana nalolu qweqwe lukamakadebona womqeqeshi.
“Ubungani bami no-Igesund abusoze baphela yingakho ngikuthathele phezulu akushoyo ngoMarques,” kusho uPrins obehleli no-Igesund ngesikhathi ekhuluma neSolezwe.
UMarques uhlalelwe yijoka elinzima njengoba kumele aqhubeke lapho kugcine khona u-Igesund ngesizini edlule.
Ethintwa lo mqeqeshi ubegcwele injabulo ngokuqokelwa kwakhe kulesi sikhundla.
“Ngeneme ngokunikwa lo msebenzi ngoba bengivele ngiwubhekile ngesikhathi ngizwa kuthiwa uGordon ufunwa yiBafana. Ngibhekene nengcindezi kwazise iqembu lenze kahle ngaphansi kukaGordon liqeda endaweni yesibili, ngakho abaphathi bangiyalele ukuthi ngenze okungaphezulu kwalokho okuwukuthatha indawo yokuqala kwiligi,” kusho yena.
Uthe: “Ngiyazi ngeke kube lula neze ukwenza lokho kodwa uma ngibheka abadlali enginabo angingabazi ukuthi singaqhubeka lapho sigcine khona ngesizini edlule. Inselelo ngiyilungele.”
ISwallows izovula isizini ngomdlalo onzima naMaZulu kuMTN 8 ngo-Agasti ngaphambi kokuthi kusuke umshikashika wemidlalo yeligi.
“Isiko leqembu nabadlali ngiyakwazi ngoba ngisebenzile nabo. Akukhona ukuthi ngizosebenza eqenjini elisha. Ingcindezi inoma yikuphi lapho uya khona. Ngingathanda ukusayinisa noma abadlali ababili. Ngeke ngijahe ukuqoka iphini lami, engingakusho wukuthi ngizolimemezela maduze. Angisiboni isidingo sokuthi ngenzee izinguquko eziningi,” kusho uMarques.